Azo Antoka fa Hitsangana ny Maty Noho ny Vidim-panavotana
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abui Acholi Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Guerze Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kambôdzianina Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Konkani (Romanina) Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rotumien Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sango Saramaccan Sena Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Soli Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yacouba Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Afaka ny ho Velona Indray ny Maty Noho ny Vidim-panavotana
Be dia be ny fitahiana ho azontsika amin’ny hoavy, noho ny vidim-panavotana. Rehefa vanim-potoanan’ny Fahatsiarovana no tena afaka misaintsaina an’izany isika. Anisan’ireny fitahiana ireny ny fitsanganan’ny maty. Tsy nataon’i Jehovah ho faty mihitsy ny olona. Anisan’ny fahoriana mafy indrindra amintsika àry izany hoe maty havana na namana izany. (1Ko 15:26) Narary erỳ ny fon’i Jesosy nahita ny mpianany nisaona rehefa maty i Lazarosy. (Jn 11:33-35) Tena mitovy toetra amin’i Jehovah i Jesosy, ka azo antoka fa malahelo be antsika koa i Jehovah rehefa maty ny havantsika. (Jn 14:7) Efa tsy andriny erỳ ny hananganana ny mpanompony, ary efa tsy andrintsika koa izany.—Jb 14:14, 15.
Andriamanitry ny filaminana i Jehovah ka azo antoka fa hilamina tsara ny fitsanganan’ny maty. (1Ko 14:33, 40) Tsy hiaraka handevina intsony isika amin’izay, fa angamba hiaraka hitsena an’ireo hatsangana amin’ny maty. Misaintsaina an’izany ve ianao, indrindra raha maty ny olona akaiky anao? (2Ko 4:17, 18) Misaotra an’i Jehovah ve ianao noho izy nanome ny vidim-panavotana? Misaotra azy koa ve ianao satria nampahafantariny ao amin’ny Soratra Masina hoe mbola ho velona indray ny maty?—Kl 3:15.
Iza amin’ny namanao na havanao no tena mba tianao ho hita indray?
Ary iza amin’ny olona tantarain’ny Baiboly no mba tena tianao hiresahana?